China Welding bhatani vokukurukura Mugadziri uye Mutengesi | ZHJ
Hunhu hwayo seinotevera:
1, Tri-simbi kuonana ine kuonana pamusoro sezvo Fe zvinhu, pamwe diki convexes kuwedzera nomoto. Inobatsira kugadzikana kwekusangana kwekusangana ne bi simbi sheet uye isina simbi sheet sheet base zvinhu nezvimwe.
2, Welding chinzvimbo chakabatanidzwa nekunyungudika simbi. Kugadzikana kwayo kwemagetsi kuri nani pane kukwirana nekubata nemufananidzo wayo wakanakisa uye chinzvimbo, Kana ichisimudza, inogona kushatisa bi simbi mukurasikirwawo nekutenderera .Pashure payo inokanganisa mita yekushisa nekutsauka kwedata.
3, Tichienzanisa neWelding Bata, ine pfupi kupisa nguva uye yakachena nharaunda .Inowanikwa kune mini chikamu inogadzira, kunyanya kune mini system.
Tri-simbi Kutaurirana kunogona kusarudza akasiyana esirivha chiwanikwa simbi nemari dzakasiyana dzemagetsi muchigadzirwa .Inowanikwa yekubata zambuko chibatanidzo nemagetsi kupisa kupisa .Iyo inoshandiswa zvakanyanya kune zvikamu zvekubatana kugadzira uye bi simbi bhiriji, senge relay, mini-switch, thermal controller, bhatani uye wedunhu mudariki.
Tri-simbi Bata chigadzirwa mutsara unogadzira roller automaton, extruder muchina, wekutema muchina, auto stamper, pepa rekubata muchina, hydraulic kumanikidza muyedzo, projekita, maikorosikopu nezvimwe. Nezve 100tesing muchina .Iyo inogona kuita yekuonana chigadzirwa pamutengi dhizaini neyegore kuburitsa mabhiriyoni maviri zvidimbu. chinzvimbo
AgSnO2, AgSnO2InO3, AgZnO2, AgCu0, AgCd0, nezvimwe.
Inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzevanonyorera, kudzosera, mabhureki edunhu uye switch, nezvimwewo 3.Chigadzirwa Chigadzirwa: Chishoma chidiki chenickle chinoiswa muAg zvinhu kuti zviite Ag zviyo zvive zvakanaka, kuti ivandudze simba, kuomarara, kuramba nemoto uye kupfeka kuramba kweAg zvinhu. Zvichakadaro, izvo zvinhu zvinochengeta zvakanakira yakakwira conductivity uye yakaderera kuonana kuramba kweiyo yakachena Ag. Rivet yakasimba ndiyo mhando yekutaurirana iyo inogadzirwa zvachose nezvinhu zvekubata-kazhinji sirivheri kana sirivheri alloys.
Pashure: Welding Gungano
Zvadaro: Magetsi Ekubata Matipi
Sirivha Simbi Alloy Wire